Somali | af somaali | Pääkaupunkiseudun omaishoitajat
Miyaad tahay xigto daryeele?
Miyaad ka caawisaa ehelkaaga guriga kula deggan arrimahaa nolol maalmeedka ku saabsan sida cunta-cunista iyo dhar-xirashada? Inuu ehelkaadu u baaxdo caawimadaada waxaa keeni kara tusaale ahaan duqnimo, naafanimo ama jirrasho. Haddii uu ehelkaada kaaga baahanyahay caawimaad joogto ah si uu guriga ugu noolaado, waxaad noqotay xigto daryeele.
Ururka Ehelka iyo Xigto daryeelayaasha ee agagaarka caasimaddu wuxuu caawiye xigto daryeelaye ahaan uga shaqeeyaa Helsinki iyo Vantaa. Qoysaska ku nool xaalad xigto daryeelitaan waa in ay heystaa macluumaadyo iyo habab ku filan si ay u hirgeliyaan nolol-maalmeedka ugu wanaagsan. Waxaan luqado kala duduwan ku bixinaa macluumaadyo ku saabsan xigto daryeelista iyo talobixin iyo hagitaan oo aan xigto daryeelayaasha siino, haddii loo baahdana waxaa la isticmaalaa turjubaan.
horumariya qaabilsan shaqada dadka dalka u soo guuray
Xafiiska ururku wuxuu furanyahay Isniin- Jimco saacadda 9-15:
Ilmaha gaarka ahi waa hadiyad – kooxda loogu talagalay hooyooyinka afka soomaaliga ku hadla, kulanka kooxda ee internetka – Etäryhmä somalinkielisille erityislasten äideille
Sidee guriga loogu hirgeliyaa daryeel daawo oo ammaan ah? – Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona -opas
Telefoon talo siineed ee arimaha taakulada ehelka ee luuqadda soomaliga – Somalinkielinen Omaisneuvo-puhelin
Qaamuuska arrimaha bulshada – Sosiaalialan sanakirja somaliksi, Tukikeskus Hilma
Isticmaalka ugu haboon ee daawooyinka
Gadashada daawooyinka ee Finland
Warbixinta eheltaakuleyn ee luuqadda soomalig`a – Tietoa omaishoidosta somaliksi -video
Waa kuma qofka ehelkiis daryeelaha ah?
Kuka on omaishoitaja -video
Tabaha garabqabashada jirahaaneed ee ehel daryeelaha (3)